दिगोले तीनवटा विद्युतीय गाडी गर्यो सार्वजनिक, मूल्य कति? :: Setopati
दिगोले तीनवटा विद्युतीय गाडी गर्यो सार्वजनिक, मूल्य कति?
दिगो ग्रुप अफ कम्पनिजले विश्व विद्युतीय सवारी साधन दिवस (वल्ड इभी डे) को अवसरमा आफ्ना तीनवटा विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गरेको छ। तीन गाडीअन्तर्गत दिगो ई–बस, दिगो ई६–मिनीबस र दिगो डाँफे–माइक्रोबस छन्।
यी गाडीहरुको प्रारम्भिक मूल्य क्रमशः दिगो ई–बसको १ करोड २६ लाख ५० हजार, दिगो ई६–मिनीबसको ९० लाख र दिगो डाँफे–माइक्रोबसको ४४ लाख रुपैयाँ पर्नेछ।
दिगो ई–बस प्रिमियम विद्युतीय बस हो। यो बसमा एबिएस, भेन्टिलेसन फ्यानसहितको रुफ ह्याच, स्टेर लाइट, प्रोटेक्सन बार, एलइडी रुट बोर्ड, रिमोट कन्ट्रोल डोर, डिजिटल घडी, एमपी३ प्लस रेडियो, चार्जिङ रिसेप्टेकल, एयर कन्डिसनर, हेड रेल लगायत जडान छन्।
उक्त बसलाई ७० जनासम्म बोक्न मिल्ने बनाउन सकिने कम्पनीले बताएको छ।
यो बसमा आगो निभाउने फायर एक्सटिङ्ग्विसर, सेफ्टी ह्याम्मर (चारवटा), पछिल्लो भागमा क्यामेरा, ढोकाको अनुगमन गर्ने प्रणाली जस्ता उपकरण जडान गरिएको छ।
दिगो ई–बसलाई सार्वजनिक यातायात, अर्बन फ्लिट, सहरभित्रको यात्रा, कर्मचारी परिवहन, एयरपोर्ट सटल लगायतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
म्पनीकाअनुसार १२९ किलोवाट आवरको लिथिअम आइरन फस्फेट ब्याट्री र १४० किलोवाटको मोटर रहेको यो बस एकपटकको फुल चार्जले स्ट्यान्डर्ड अपरेसन कन्डिसनमा २०० किलोमिटरसम्म गुड्छ।
यसको प्रतिकिलोमिटर बिजुली खर्च ७ रुपैयाँ १ पैसा पर्छ।
प्राविधिक रुपमा उन्नत डिजाइनको दिगो ई६ मिनीबसले २० जनासम्म यात्रुलाई बोक्नसक्छ।
यो बसमा आवश्यकता अनुसार १४, १६, १७ र २० जनासम्मको लागि व्यक्तिगत सिट भएको बनाउन मिल्छ।
यसलाई सहरभित्रको वा एक सहरबाट अर्को सहरसम्मको यात्रा, कर्मचारी परिवहन, एयरपोर्ट सटल, टुरिस्ट पिक र ड्रप, स्कुल भ्यान तथा साइट सिइङ भेहिकलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ।
८० किलोवाट आवरको लिथिअम आइरन फस्फेट ब्याट्री र ११० किलोवाटको मोटर रहेको यो मिनीबस एकपटकको फुल चार्जले स्ट्यान्डर्ड अपरेसन कन्डिसन मा २१० किलोमिटरसम्म गुड्छ (एनइडिसी २८० किलोमिटर )।
यो बसको प्रतिकिलोमिटर बिजुली खर्च ३ रुपैयाँ २ पैसा मात्र पर्न आउने कम्पनीले बताएको छ।
दिगो डाँफे ११ सिटको माइक्रोबस हो। डाँफे फ्लिट सर्भिस, सहरभित्रको र एक सहरबाट अर्को सहरसम्मको यात्रा, कर्मचारी परिवहन, एयरपोर्ट सटल, टुरिस्ट पिक र ड्रप, स्कुल भ्यान तथा साइट सिइङ भेहिकलको लागि उत्तम विकल्प रहेको कम्पनीले बताएको छ।
४२ किलोवाट आवरको लिथिअम आइरन फस्फेट ब्याट्री र ६० किलोवाटको मोटर रहेको यो सवारी साधन एकपटकको फुल चार्जले स्ट्यान्डर्ड अपरेसन कन्डिसन मा २५० किलोमिटरसम्म गुड्छ (एनइडिसी ३०० किलोमिटर)। यो माइक्रो बसको प्रतिकिलोमिटर बिजुली खर्च १ रुपैयाँ ६ पैसा पर्न आउने कम्पनीको भनाइ छ।
सवारी साधन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा दिगोका सिइओ हेमन्त पुरानिकले ‘नेपालमा बढ्दो वायु प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न इ–मोबिलिटी स्थायी र अनिवार्य रहेको बताए।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन अंगिकार गर्ने परिपाटीलाई गति दिन दिगो ग्रुप अफ कम्पनिजले आफ्नो प्रयासहरुलाई पूर्ण स्तरको इ–मोबिलिटी इकोसिस्टम विकाससँग एकाकार गराएको छ ।